Fijoroana vavolombelona /
Faly miarahaba antsika mianakavy amin'ny finoana, ny fahasoavan'ny Tompo anie hoaminareo mandrakariva.
Ny fijoroako vavolombelona eto ankehitriny dia ny nanasitranan'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny "Cancer".
Tamin'ny taona 2009 dia nahitana fivontosana tao amin'ny nonoko havia, rehefa hita izany dia nentina tamin'ny dikotera. Ary nilaza ny dokotera hoe mila levonina io fa raha tsy izay dia tsy maintsy didina, dia nomeny ny karazam-panafody handevonana azy, ny fihinana azy dia nandritry ny herinandro. Ny tsapako, arakaraka ny nihinanako ny fanafody no vao maika namphombo ny aretina, tsy nisy fahafahany mihitsy. vao maika aza nivonto be sady nihanarary be sy nitombo ny fivontosana ary nihamafy hatrany izany, tena lasa nivaingana, raha tsapaina dia toy ny vato izany raha tsapaina. tao anatin'izany dia efa nihakivy aho, efa nanafatra ny vadiko aho hoe tezao tsara ny zanantsika, satria ny aretina nahafaty ny reniko ihany koa dia tahaka io; ka izany no lasa nandoto ny saiko mihitsy. Rehefa izany dia nahazo tolo-tsaina tamin'i Jesosy, izany hoe: nivavaka, dia nisy tolo-tsaina nomen'i Jesosy, mandehana any amin'ny fiangonana ny Asabotsy. Marihina moa fa ny Alatsinainy no nahitana ny aretina, ka rehefa tonga ny Asabotsy maraina, nandeha nankany am-piangonana aho toy ny isan-kerinandro handeha hianatra Soratra Masina. Rehefa nirava ny fianarana dia misy feo mitsika tamiko, ary efa mpanompon'Andriamanitra ihany koa efa nampiandrasiny sy nirahiny teo. Marihina fa io mpanompon'Andriamanitra io dia tsy mahalala ahy akory, fa izaho no nanatona azy satria izy no hitako sisa nipetraka teo.
Rehefa notantaraiko aminy teotry ny aretiko, dia nilaza izy fa izany no notenenin'i Jesosy taminy, ka izany no nahatonga azy niandry teo, raha amanaraka tsara ity fijoroana vavolombelona ity hianao amin'izao dia hitako fa tena Andriamanitra velona tokoa no Tompontsika; miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina izany. Tafahaona àry izahay dia nandeha namonjy ny tokantranoko tamin'io Asabotsy io. Ary teo ihany dia nisy feo reko manao hoe: "tsy ho fahafatesana no anton'izao fa ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra". Natao ny asan'Andriamanitra tamiko tamin'io andro io, rehefa vita izany dia notenenin'ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'izany hoe: "Ampinonoy amin'izay ny zanakao io", natao ny fampinonoana, tsapako fa tena marary ilay izy, fa ny finoana kosa no tao anatiko dia ny ananako fahasitranana. Natoky aho tahaka ilay mararin'ny paralisisa izay natsangan'i Jesosy sy ireo olona maro izay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany, natoky tokoa aho fa veolna ny Tompo ary manasitrana Izy, araka ny voalaza ao amin'ny Salamo 30:2 "Jehovah Andriamanitro ô!, nitaraina taminao aho, dia nahasitrana ahy Hianao.". Ny harivan'io ihany dia nanao voady tamin'i Jesosy aho hoe, tsy maintsy mandeha mivavaka aho ny ampitso alahady, nony maraina dia tsapako fa tena maivana ny tenako iray manotolo, ary notsapaiko ny nonoko fa tsy henoko naharary intsony ary tsy tao intsony ilay nivonto. Velom-pisaorana ny Tompo aho fa tena tsara tokoa ny Tompontsika ary velona izy; sady tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.
Ry havana, te hilaza aminao aho hoe: matokia ny Tompo hianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, hainy nataony tamiko izany ary mino aho fa hainy atao aminao ihany koa. Vvelona ny Tompo ary miasa mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Na dia teo aza ny fanakiviana nataon'ny devoly sy ny fampihorohoroana izay nataony dia resy ny fahavalo, koa raha sendra olana ianao aza mandeha aiza na aiza, fa manatona an'i Jesosy aloha. Iey no anotanio ary dia tena miteny sy mihaino vavaka tokoa ny Tompontsika, miverena aminy fa tsy manary anao Izy.
Ireto misy tenin'Andriamanitra entiko hampaherezana anareo:
2 Tant 7:14 "Raha ny oloko izay nantsoiko tamin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony; dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny."
Eksodosy 15:26 "Ka hoy Izy: Raha hazoto hihaino ny teon'i Jehovah Andriamanitrao hianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy hihaino ny làlany ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko amin'ireny aretina tehetra ireny, izay nataoko tamin'ny Egyptianina; fa Izaho no Jehovah izay mahasitrana anao."
Date de dernière mise à jour : 29/10/2013